IDenmark izonikelela abahlukunyezwe yiBoko Haram | News24
IDenmark izonikelela abahlukunyezwe yiBoko Haram
Copenhagen – Uhulumeni waseDenmark ubeke isamba semali elinganiselwa ku-$2milion ukusiza labo abahlukunyezwa yiqembu lamavikelambuso iBoko Haram eNigeria.
UNgqongqoshe wezangaPhandle eDenmark uMogens Jensen uthe izwe lakhe likwenza lokhu ngokuzwelana nemindeni eyahlukumezeka njengoba befuna ukubanikeza izimpahla zokugqoka, ukudla, indawo yokuhlala nokuthi bakwazi ukubhekana nesimo sempilo ngemuva kokuhlukumezeka.
OLUNYE UDABA: Kusolwa iBoko Haram ngokuthunjwa kwabangu-100
UJensen ngoLwesine uthe isigameko sakamuva sokubulawa kwabantu abangu-100 eNigeria sesenze ukuhlala kwangaba lula ezindaweni ezisemakhaya kuleli lizwe nasemazweni angomakhelwane okubalwa kuwo iChad, Niger neCameroon.
Uthe le mali izodluliselwa kwabeRed Cross nakwiNhlangano yeZizwe ukuze bayisabalalise ngendlela efanele.
IBoko Haram ihlalise abantu baseNigeria lubhojozi njengoba ihlasela ibulale abantu ikakhulukazi labo abazinze enyakatho yaleli lizwe.